Ukuvaleka kwemoto ngaphambili nangasemva.
ngu admin ku 05-11-21
Akukho ntlobo zininzi ze-sunshield yangaphambili, kukho iindidi ezimbini zefoyile ye-aluminiyam kunye namalaphu angalukwanga. Ifoyile yeAluminiyam yahlulahlulwe ngokuqhelekileyo ngohlobo lwe "ibhodi yokukhanya" eqhelekileyo kunye nohlobo lwepateni. Ubungakanani ngokuqhelekileyo yi-60 * 130cm, efanelekileyo kwiimoto ezininzi ezincinci. I-alum...
Isicwangciso sokukhusela ilanga sokuqhuba ehlotyeni
ngu admin nge 23-06-21
Ihlobo luvavanyo olukhulu lwemoto, imozulu eqhubekayo yobushushu obuphezulu kulula ukubangela ingozi kwimoto kunye nomnini, ngoko ke ungayinika njani i-sunscreen yemoto? Ivisor yelanga yemoto Ehlotyeni, lungiselela ii-sunshades ezininzi ezibonisayo ukuze uhlukanise ngokufanelekileyo ubushushu emotweni. Kukho ama...
Indlela yokukhusela imoto kwilanga elitshisayo?
Kwimeko yemfuno yemoto yanamhlanje, ndikholelwa ukuba wonke umntu ufumene imvakalelo yokungena emotweni xa imozulu ishushu. Kufana nokunxiba ibhatyi enomqhaphu ukuze ungene kwi-sauna. Ayininzi kakhulu. Kwimeko enjalo, kufuneka unyamezele kungekuphela nje ixesha eliphakamileyo...
Ifilimu yefestile "inokwenza ukukhwela kwakho kulumke" kwaye ikhusele ulusu lwakho namehlo elangeni
Washington, Juni 21, 2021/PRNewswire/ -Itekhnoloji yamanqanaba amaninzi asetyenziswa kwimveliso kunye nofakelo lobuchwephesha beefilim zefestile zemoto "inokwenza ukukhwela kwakho kube bukhali ©", njengeglasi yemoto eqhelekileyo, nokuba ibonelelwe kwiiSUV, iilori okanye iimoto. Ngokutsho kwe-Int...